Warshadda Galoofyada | Soosaarayaasha Galoofinta Shiinaha, Alaab-qeybiyeyaal
Badbaadada Ka Hortagga Badbaadinta Gacmo gashiyada Vinyl ee Bilaashka ah ee Imtixaanka
Nitrile waa co-polymer synthetic ah, oo lagu sameeyay acrylonitrile iyo iskudhiska butadiene. Gacmo gashi Nitrile waxay noloshooda u bilaabaan sidii cinjir ka soo baxa geedaha caagga ah. Ka dib waxay isu beddelaan caag cinjirka ah. Ka dib marka loo rogo caag cinjir ah, mar labaad ayaa dib loo soo celiyaa illaa ay ka noqdaan maaddada nitrile.
Tuurista Tuubbooyinka Gacan-gashiga Polyetylenka ah (CPE)
Textured * Powder Free * Laguma samayn cinjirka cinjirka dabiiciga ah
Gacan-gashiyada fayadhowrka la tuuri karo ee loo yaqaan 'PE' ee la tuuro ayaa ka sameysan maaddada polyetylenka ee aan sunta lahayn iyo kuwa aan ur lahayn. Waxaa loo isticmaali jiray ka shaqeynta cuntada, kalkaalinta, karinta jikada, shaqada guriga, timo qurxinta timo midabaynta, kaamam
hilibka la dubay, iwm iyo markay maqaayadaha u baahan yihiin inay gacmaha ku taabtaan cuntada.
Qalliinka Caafimaadka ee La Tuuri Karo Ee Qololka Nitrile Gloves Budada Bilaashka ah
Galoofisyada gacmo gashiga la tuuri karo ee fasalka ka samaysan nitrile-la'aan
Dhumucdiisuna: 4 mil
Awood aan fiicnayn, xirasho iyo debecsanaanta
100 galoofis sanadkiiba
Qoraal loogu talagalay awoodda qabashada kor loo qaaday
Galoofiska Imtixaanka Caafimaadka ee Nitrile (Bilaash Bilaash) 100pcs / box; 10boxes - 1000 galoofyada /
Xajmiga Xaaladda: Fasalka Caafimaadka ee Dhexdhexaadka Aan Dhab ahayn
Gacmo gashiyada Qalliinka Caafimaadka Qalliinka ee La Tuuri karo
Gacmo gashiyada qalliinka Latex waa qayb aad u ballaadhan oo hawl maalmeedka ka socda cisbitaalka, kana ilaaliya bukaannada iyo shaqaalahaba gudbinta cudurrada ama noocyada kale ee jira. Habka wax soo saarkoodu runti waa mid fudud, oo ka caawinaya inay noqdaan kuwo la awoodi karo oo la tuuri karo.